Monthly Bonus For August 2020 ? Silver ? Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 1,633 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Sandar Win Maung (FB-000695) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Sandar Win Maung August လအတွင်း Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 1,633 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Silver အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 1,633 ကျော်အတွက် ?ငွေသား (3) သိန်း (5) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 500 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Zar Ni Aung (FB000119) Moe Thuzar Tun (FB001134) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Silver Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 500 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (2) သိန်း (3) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 600 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Tin Moe Thu (FB000101) Aye Thida Cho (FB001996) Aye Aye Hset (FB000414) Htet Htet Aung (FB001202) Soe Soe Kyi (FB001293) Thet Su Kyi (FB000012) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Silver Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 600 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (2) သိန်း (6) သောင်း (5) ထောင်ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Garnier Essence ဘူး 1800 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Zu Mon Hlaing (FB000152) Khaing Myat Oo (FB000052) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Silver Agent တို့ !!! June လအတွင်း Garnier Essence ဘူး 1800 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (8) သိန်း (3) သောင်းကျပ်တိတိနှင့် ???? Garnier Essence ဘူး (75) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။